रेडियो तमोर १०२ मेघाहर्ज ऐश्वर्या राय र प्रियंका चोपडापछि अब मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बलिउडमा प्रवेश गर्ने !
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)- ऐश्वर्या राय र प्रियंका चोपडापछि अब मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर पनि बलिउडमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ। यतिबेला मिस वर्ल्डसँग जोडिएका सर्तहरुका कारण व्यस्त रहेकी मानुषीले आफूले बलिउडका लागि ढोका बन्द नगरेको बताएकी छिन्। उनका अनुसार, उनीभित्र एक अभिनेत्री लुकेको छ।
मानुषीले भनेकी छिन्, 'म आफूभित्र रहेको अभिनेत्रीलाई महसुस गर्न सक्छु। एक डाक्टर र एक अभिनेत्रीमा समानता हुन्छन्। मेरो बुवा सधैं भन्नुहुन्छ, राम्रो डाक्टर बन्न तिमीले राम्रो अभिनेत्री बन्नुपर्छ। किनकि आधाजसो बिरामी त तपाईंको व्यवहारबाटै ठीक हुन्छन्।'
फिल्म खेल्ने सम्भावनाको ढोका खुला राखेकी उनलाई अहिलेसम्म कति वटा फिल्मबाट प्रस्ताव आयो त? यो प्रश्नमा मानुषी भन्छिन्, 'मैले अहिलेसम्म कुनै पनि अवसरलाई अस्वीकार गरेको छैन। अझै प्रतीक्षा जारी छ। मैले अहिले केही जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ, सही समय आएपछि बलिउडको बारेमा फैसला लिनेछु।'
उनले यसको कारण दिएकी थिइन्, 'उहाँ सामाजिक र प्रासंगिक फिल्महरु बनाउनुहुन्छ, त्यो लोभलाग्दो पाटो हो।'